Ciidammada Milatariga Myanmar Oo Beeniyay Inay Xasuuqeen Muslimiinta Rohingya. | Awdalmedia.com
Ciidammada Milatariga Myanmar Oo Beeniyay Inay Xasuuqeen Muslimiinta Rohingya.
Ciidammada Myanmar ayaa sii daayay natiijada baadhitaan ay iyagu sameeyeen oo ay iskaga bariyeeleen eedaymaha rabshadaha Rohingya.
Waxay diideen in ay dileen dadka qawmiyadda Rohingya, in ay guryahooda gubeen iyo in ay kufsadeen gabdhahooda iyo dumarkooda.
Sheegashadaas ayaa liddi ku ah dhibaatadii uu indhihiisa ku soo arkay wariye BBC ka tirsan taas oo Qarammada Midoobayna ay ku tilmaantay xasuuq isir sifayn ah oo taariikhda gali doona.
Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa sheegtay in warbixintu ay tahay isku day "lagu qarinayo wixii dhacay".
Hay'addaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa Qarammada Midoobay ugu baaqay in gobolka loo ogolaado in ay tagaan dad xaqiiqo raadin ah.
Warbaahinta ayaa si wayn looga xanibay aagaas, laakiin safar aad loola socday oo uu weriyaha BBC-da uga soo warrama Koonfurta Aasiya, Jonathan Head uu ku tagay halkaa ayuu indhihiisa ku arkay dad Budhiste ah oo gubaya tuulooyin ay leeyihiin qawmiyadda Rohingya, iyadoo ay goobtaas taagan yihiin booliis hubaysan.
In kabadan nus milyan dad ah oo badankood Muslimiinta Rohingya ee laga tiro badan yahay ah ayaa ka cararay Myanmar oo ay aqlabiyad ka yihiin dadka Budhistaha ah tan iyo bishii Agoosto ee sannadkan.
Ka dib markii ay billawdeen hawlgal ay kaga jawaabayeen malayshiyo Rohingya ah oo weerarro ku qaaday saldhigyo booliis, dilayna qaar ka mid ah laamaha ammaanka.
Dadkaas badankood waxay gaareen Bangladesh iyagoo qaarkood ay ku yaallaan dhaawacyo ay rasaas ka mid yihiin, waxayna sheegeen in ciidammada Myanmar oo gacan siinaya dad Budhiste ah in ay gubeen tuulooyinkoodii ayna weerareen oo laayeen shacabka.
Laakiin war qoraal ah oo milatarigu uu soo dhigay Facebook ayay ku sheegeen in ay waraysi la yeesheen kumannaan shacab ah kuwaas taageeray sheegashadooda, waxayna sheegeen in dadku ay qireen in laamaha ammaanku
Milatarigu wuxuu sheegay in ay dab qabadsiinta masuul ka yihiin dad ka tirsan bulshada Rohingya (oo la dhoho Bengali) kumannaanka ruux ee qaxayna laga dalbaday guuritaanka, ayna u qaxeen iyaga oo ka baqaya argagixisada.
Afhayeen u hadlay hay'adda Amnesty International ayaa sheegay in milatarigu uu "caddeeyay" in uusan doonaynin isla xisaabtan".
Wuxuu intaas ku daray in beesha caalamku ay sare u qaaddo xaqiijinta in tacadiyadaas aan laga gudbin iyadoo aan la ciqaabin dadkii gaystay."
Jeneraalkii masuulka ka ahaa gobolkaas ayaa hawshaas laga wareejiyay, laakiin wax faahfaahin ah lagama bixinin arrintaas.
Sareeye Gaas Maung Maung Soe ayaa "kaydka la galiyay," sida uu sheegay qof u hadlay wasaaradda difaaca.
Kooxda magaceeda loo soo gaabiyo ARSA oo sheegata in ujeedadoodu ay tahay in ay "difaacdo, badbaadiso ilaalisana" dadka Rohingya ayaa ka kooban dhallinyaro samaysa hub guryaha lagu hagaajiyo waxayna tabobar ka helaan dad ajaaniib ah sida ay sheegeen dadka la socda xaaladda deegaankaas.